Kevin de Bruyne ayaa Isniinta la xiriiri doona xulka Belgium ka dib markii qalliin yar lagu sameeyay ka dib markii uu dhaawac kasoo gaaray kulankii Manchester City finalkii Champions League.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester City ayaa dhaawacmay isbuucii la soo dhaafay ka dib markii ay isku dheceen Antonio Rudiger, taasoo keentay walaac ku saabsan ka qeyb qaadashada de Bruyne ee xulkiisa Belgium Euro 2020.
Si kastaba ha noqotee, de Bruyne ayaa lagu waday inuu ka maqnaado kulanka furitaanka ee Belgium ee ay la ciyaarayaan Russia bisha June 12, waa inuu awoodaa inuu qeyb buuxda ka ciyaaro inta ka harsan tartanka.
Isaga oo ka hadlaya qalliinka de Bruyne, maamulaha Belgium Roberto Martinez wuxuu yidhi: “Waxay u dhacday si aad u wanaagsan, oo aad u wanaagsan. Waxaan sugeynaa Isniinta markii uu kusoo biiri doono kooxdeena
Uma baahnaan doono soo kabasho dheer ayuu hadalkiisa ku daray macalinka qaranka Belgium-ka.
‘Hawlgalku wuxuu qaatay 20 daqiiqo oo keliya. Shaqaalaha caafimaadka ayaa ku qancay natiijada. De Bruyne haatan wuxuu sameynayaa shaqo fiican, intaas waa intaas. ‘
Horraantii Isbuucaan Martinez ayaa shaaca ka qaaday in de Bruyne ay tahay inuu xirto maaskaro la mid ah kii uu saaxiibkiis reer Belgium Jan Vertonghen ku ciyaaray markii uu u ciyaarayay Tottenham laba sano ka hor.
Wararka Maanta : Xiddiga Real Madrid Raphael Varane oo doonaya inuu u dhaqaaqo Premier...
Related Topics:BelgiumbiiriBruynedoonaeurogool24 net wararka ciyaarahagoolfmKevinsoowararka ciyaaraha suuqa kala iibsigaWararka Maantawararka maanta ciyaarahawararka maanta hiiraan onlinewararka maanta muqdishoxulka
Wararka Maanta : Arsenal Iyo Tottenham Oo Ku Dagaalamayaan Daafaca Lyon Joachim Andersen.
Wararka Maanta : Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: David Alaba oo ku biiri kara...
Wararka Videos49 mins ago